မိဘမေတ္တာ စမ်းရေပမာ အမြဲအေးမြတာ
22 Sep 2018 . 9:12 PM
တစ်ခါတုန်းကပေါ့ . . လေးနှစ်အရွယ်ကောင်လေးက အိမ်ရှေ့မှာရှိတဲ့ ပန်းသီးပင်ပေါ်မှာ တက်လိုက်၊ ပန်းသီးတွေ ခူးစားလိုက်၊ ပန်းသီးပင်အောက်မှာ တရေးအိပ်လိုက်နဲ့ ဇိမ်ကျနေပါတယ်။ ပန်းသီးပင်ကြီးနဲ့ဆော့နေတာ အချိန်တွေကြာပြီဆိုတော့ သံယောဇဉ်တွေတောင် ဖြစ်လို့နေပါပြီ။ ပန်းသီးပင်က ကောင်လေး လာဆော့တဲ့အချိန်မှာဆို အရမ်းပျော်ရုံမက ကောင်လေးကို တော်တော်ချစ်တယ်။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကောင်လေးက ၁၂နှစ်လောက်ဖြစ်လာတော့ ပန်းသီးပင်ကြီးဆီမှာ လာမဆော့တော့ဘူး။ အရုပ်လေးတွေနဲ့ ပျော်မွေ့နေတော့ ပန်းသီးပင်ကြီးမှာ ကောင်လေးကို လွမ်းတဲ့စိတ်နဲ့ မပျော်ဖြစ်နေတာပေါ့။ တစ်နေ့မှာ မမျှော်လင့်ဘဲ ကောင်လေးဟာ ပန်းသီးပင်ကြီးဆီ မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ရောက်လာတယ်။
“ကလေးရယ် . . အရင်တုန်းကလိုပဲ ငါ့ဆီကို လာဆော့ပါလား။ ကလေးမရှိတော့ ငါ့မှာတစ်ယောက်တည်း ပျင်းလိုက်တာကွယ် “
“ပန်းသီးပင်ကြီးရယ် . . ကျွန်တော်အရင်လို ခင်ဗျားနဲ့မဆော့ချင်တော့ဘူးဗျာ . . ၊ သူများတွေလို အရုပ်တွေနဲ့ ဆော့ချင်တယ်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေဆို အရုပ်အကြီးကြီးတွေနဲ့ ဆော့နေကြတာ။ ကျွန်တော့်မှာက အရုပ်သေးသေးလေးပဲ ရှိတယ်လေ။ သူတို့လို အရုပ်ကြီးဝယ်ဖို့ ခင်ဗျားပိုက်ဆံပေးပါလားဗျာ”
“ဟယ် ကလေးရယ် . . ပြောတတ်လိုက်တာ။ ငါက သစ်ပင်လေ၊ လူသားတွေလို ပိုက်ဆံဘယ်ရှိပါ့မလဲ။ ဒါပေမယ့် မပူပါနဲ့ ကလေးရယ် ..။ ငါ့အသီးတွေကို ခူးရောင်းလိုက်ရင် လိုချင်တဲ့အရုပ်တွေ ဝယ်လို့ရပြီပေါ့ ကလေးရယ်”
ပန်းသီးပင်ကြီးရဲ့စကားကိုကြားတော့ ကောင်လေး စိတ်အားတက်သွားတယ်။ ပန်းသီးပင်ပေါ်တက်၊ ပန်းသီးတွေကို ခူးပြီး ဈေးထဲမှာ သွားရောင်းလိုက်တော့ လိုချင်တဲ့အရုပ်ကြီးတွေ အများကြီးကို ဝယ်နိုင်သွားတယ်။ ကောင်လေးက သူလိုချင်တာတွေ ရသွားပြီ ဆိုတော့ ပန်းသီးပင်ကြီးကို မေ့သွားဟန်တူပါတယ်။ အရုပ်တွေနဲ့ပဲ ဆော့နေပြီးတော့ ပန်းသီးပင်ကြီးဆီကို ခြေဦးမလှည့်တော့ပါဘူး။ ပန်းသီးပင်ကြီးမှာတော့ ကောင်လေးကို စိတ်မဆိုးနိုင်ဘဲနဲ့ ကောင်လေးလာဆော့မယ့်အချိန်ကိုပဲ မျှော်နေတာပေါ့။
အချိန်တွေကုန်လာလိုက်တာ ကောင်လေးကလည်း လူကြီးအရွယ်ရောက်လာပြီး အိမ်ထောင်တွေဘာတွေတောင် ကျလာတာပေါ့။ တစ်နေ့မှာတော့ ကောင်လေးဟာ ပန်းသီးပင်ကြီးဆီ ရောက်လာပါတယ်။ ကောင်လေး ရောက်လာတော့ ပန်းသီးပင်ကြီးက ဝမ်းသာအားရ ကြိုရှာပါတယ်။ ကောင်လေးဟာ အရွယ်တွေရောက်လာပေမယ့် ပန်းသီးပင်ကြီးကတော့ ကောင်လေးကို သူ့ဆီကို လာဆော့တဲ့ ကလေးတစ်ယောက်လိုပဲ မြင်နေပါတယ်။
“ဟာ . . ပန်းသီးပင်ကြီးကလည်းဗျာ . ဘာတွေလာပြောနေတာတုန်း။ ကျွန်တော်ကလေး မဟုတ်တော့ဘူးလေ။ အရွယ်ရောက်လို့ အိမ်ထောင်တောင် ကျနေပြီဗျ။ အခု စိတ်ညစ်တယ်ဗျာ။ ပိုက်ဆံမရှိဘူး၊ အိမ်ဆောက်ချင်လို့ ပိုက်ဆံပေးပါလားဗျာ”
“ ငါ့မှာက သစ်ပင်ဆိုတော့ ပိုက်ဆံမရှိပေမယ့်လည်း ဘာမှမပူပါနဲ့ ကောင်လေးရယ်။ ငါ့မှာ ကိုင်းတွေရှိတယ်လေ။ ငါ့ကိုင်းတွေကို ခုတ်ပြီးတော့ အိမ်ဆောက်ပေါ့”
ကောင်လေးက ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲ ပန်းသီးပင်ကြီးရဲ့ ကိုင်းတွေကို ခုတ်ပြီး အိမ်အသစ်ဆောက်လိုက်ပါတယ်။ အိမ်ဆောက်ပြီးတာနဲ့ ကောင်လေးက ပန်းသီးပင်ကြီးဆီကို ယောင်လို့မှ ခြေဦးမလှည့်တော့ပါဘူး။ ပန်းသီးပင်ကြီးမှာတော့ ကောင်လေးကို လွမ်းဆွတ်သတိရပြီးတော့ မျှော်လင့်နေတာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ အချိန်တွေကုန်လာပြီးတော့ ကောင်လေးဟာလည်း အသက်၅ဝကျော် လူကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်လာပါတယ်။ တစ်နေ့မှာ ကောင်လေးက ပန်းသီးပင်ကြီးဆီကို ရောက်လာပါတယ်။ ကောင်လေးလာတော့ ပန်းသီးပင်ကြီးမှာ ပျော်လို့ရွှင်လို့။
“ကလေးရယ် . . ငါနဲ့လာဆော့ပါဦးလား။ အရင်လို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပေါ့ ကလေးရယ်။ မင်းမရှိလို့ ငါ့မှာ ပျင်းလိုက်တာကွယ်”
“ပန်းသီးပင်ကြီးကလည်း . . ။ ကျွန်တော်ကလေး မဟုတ်တော့ဘူးလေ။ မြေးတောင် ချီနေရပြီ။ စက်လှေတစ်စီးနဲ့ ရွက်လွှင့်ပြီး အနားယူချင်လို့။ ငါ့ကို ကူညီပေးပါလားကွာ”
“ကလေးရယ် . . မင်းလိုအပ်တာတွေ အကုန်လုံးကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ငါ့ဘက်က အဆင်သင့်ပါပဲ။ ငါ့ပင်စည်ကြီးကို ခုတ်လှဲပြီးတော့ စက်လှေဆောက်လိုက်လေ။ ပြီးရင် စက်လှေလေးစီးပြီးတော့ အနားယူပေါ့ ကလေးရယ်”
ပန်းသီးပင်ကြီးရဲ့ ခွင့်ပြုချက်ကို ကြားရတော့ ကောင်လေးက ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲ ပန်းသီးပင်ရဲ့ ပင်စည်ကြီးကို အခြေကနေ လွှနဲ့တိုက်ပြီး စက်လှေဆောက်လိုက်တာပေါ့။ ပန်းသီးပင်ကြီးမှာ သစ်ငုတ်တိုပဲကျန်ပါတော့တယ်။ ကောင်လေးကလည်း လိုချင်တာကို ရပြီဆိုတော့ ပန်းသီးပင်ကြီးကို သတိမရတော့ပါဘူး။ ပန်းသီးပင်ကြီးမှာတော့ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကောင်လေးလာမယ့်အချိန်ကိုပဲ အမြဲမျှော်လင့်နေရတာပေါ့။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးတဲ့အခါမှာ ကလေးဟာလည်း အသက်၈ဝနားကပ်လို့ လာပါတယ်။ ဒီတစ်ခါ ပန်းသီးပင်ကြီးဆီရောက်လာတော့ ပန်းသီးပင်ကြီးကလည်း အရင်လို ဝေဝေဆာဆာမရှိတော့ပါဘူး။
“ကလေးရယ် . . ဒီတစ်ခါ မကူညီနိုင်လို့ စိတ်မကောင်းဘူးကွယ် . . ။ ငါ့မှာက မင်းအတွက် ပန်းသီးတွေ မသီးနိုင်တော့ဘူး”
“ပန်းသီးပင်ကြီးရယ် . . ငါ့မှာလည်း ဝါးစရာသွားတွေ မရှိတော့ပါဘူး”
“ပြီးတော့လည်းလေ . . ။ ကောင်လေးရယ် မင်း တက်ပြီး ဆော့လို့ရအောင် ပင်စည်တွေ၊ အကိုင်းတွေလည်း မရှိတော့ပါဘူးကွယ်”
“ပန်းသီးပင်ကြီးရယ် . . ။ ငါလည်း အရင်လို မဆော့နိုင်တော့ပါဘူး။ အသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့ အရင်လို မပေါ့ပါးတော့ဘူးလေ။ ငါ အေးဆေးနားချင်လာပြီကွာ”
“ကောင်လေးရယ် . . ။ အေးဆေးနားချင်ရင်တော့ ငါ့မှာ အမြစ်တွေကျန်ပါသေးတယ်။ ငါ့ပေါ်မှာ အေးဆေးထိုင်နားလိုက်ပါနော်။
ပန်းသီးပင်ကြီးက ငိုကြွေးပြီးတော့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ကောင်လေးဟာလည်း မောဟိုက်နွမ်းလျစွာနဲ့ သစ်ငုတ်တိုပေါ်မှာ ထိုင်ချလိုက်ပါတယ်။ နေဝင်ချိန်ကိ စောင့်မျှော်ရင်းနဲ့ပေါ့။
ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါပဲ။ ပုံပြင်ထဲက ပန်းသီးပင်ကြီးကို သနားနေတယ်ဆိုရင်တော့ မိဘနှစ်ပါးကို ကျေးဇူးဆပ်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့တွေက အရွယ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ မိဘရင်ခွင်ကနေထွက်ပြီး တစ်အိုးတစ်အိမ်ထူထောင်ကြတယ်။ “ခလုတ်ထိမှ အမိတ” ဆိုသလို အခက်အခဲတွေ တွေ့လာမှ၊ ဒုက္ခတွေ ရောက်လာမှ မိဘနှစ်ပါးကို သတိရလာကြတယ်။ မိဘတွေ ရင်ထဲမှာတော့ သားသမီးတွေ ဘယ်လိုပဲရက်စက်ပစ်ခွာသွားပါစေ၊ မဟောင်းနွမ်းတဲ့အချစ်တွေနဲ့ ပေးဆပ်နေတဲ့သူတွေပါ။ အဲဒီတော့ မိဘနှစ်ပါးကို စိန်ရွှေပတ္တမြား၊ အိမ်မြေခြံကားတွေနဲ့ မထားနိုင်ရင် နေပါစေ၊ မိဘနှစ်ပါး သက်ရှိထင်ရှားရှိနေတုန်း မပူမပင်မကြောင့်မကြဖြစ်ရအောင် ကျေးဇူးဆပ်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
မိဘမတ်ေတာ စမျးရပေမာ အမွဲအေးမွတာ
တဈခါတုနျးကပေါ့ . . လေးနှဈအရှယျကောငျလေးက အိမျရှမှေ့ာရှိတဲ့ ပနျးသီးပငျပျေါမှာ တကျလိုကျ၊ ပနျးသီးတှေ ခူးစားလိုကျ၊ ပနျးသီးပငျအောကျမှာ တရေးအိပျလိုကျနဲ့ ဇိမျကနြပေါတယျ။ ပနျးသီးပငျကွီးနဲ့ဆော့နတော အခြိနျတှကွောပွီဆိုတော့ သံယောဇဉျတှတေောငျ ဖွဈလို့နပေါပွီ။ ပနျးသီးပငျက ကောငျလေး လာဆော့တဲ့အခြိနျမှာဆို အရမျးပြျောရုံမက ကောငျလေးကို တျောတျောခဈြတယျ။
တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ကောငျလေးက ၁၂နှဈလောကျဖွဈလာတော့ ပနျးသီးပငျကွီးဆီမှာ လာမဆော့တော့ဘူး။ အရုပျလေးတှနေဲ့ ပြျောမှနေ့တေော့ ပနျးသီးပငျကွီးမှာ ကောငျလေးကို လှမျးတဲ့စိတျနဲ့ မပြျောဖွဈနတောပေါ့။ တဈနမှေ့ာ မမြှျောလငျ့ဘဲ ကောငျလေးဟာ ပနျးသီးပငျကွီးဆီ မကျြနှာငယျလေးနဲ့ ရောကျလာတယျ။
“ကလေးရယျ . . အရငျတုနျးကလိုပဲ ငါ့ဆီကို လာဆော့ပါလား။ ကလေးမရှိတော့ ငါ့မှာတဈယောကျတညျး ပငျြးလိုကျတာကှယျ “
“ပနျးသီးပငျကွီးရယျ . . ကြှနျတျောအရငျလို ခငျဗြားနဲ့မဆော့ခငျြတော့ဘူးဗြာ . . ၊ သူမြားတှလေို အရုပျတှနေဲ့ ဆော့ခငျြတယျ။ ကြှနျတေျာ့သူငယျခငျြးတှဆေို အရုပျအကွီးကွီးတှနေဲ့ ဆော့နကွေတာ။ ကြှနျတေျာ့မှာက အရုပျသေးသေးလေးပဲ ရှိတယျလေ။ သူတို့လို အရုပျကွီးဝယျဖို့ ခငျဗြားပိုကျဆံပေးပါလားဗြာ”
“ဟယျ ကလေးရယျ . . ပွောတတျလိုကျတာ။ ငါက သဈပငျလေ၊ လူသားတှလေို ပိုကျဆံဘယျရှိပါ့မလဲ။ ဒါပမေယျ့ မပူပါနဲ့ ကလေးရယျ ..။ ငါ့အသီးတှကေို ခူးရောငျးလိုကျရငျ လိုခငျြတဲ့အရုပျတှေ ဝယျလို့ရပွီပေါ့ ကလေးရယျ”
ပနျးသီးပငျကွီးရဲ့စကားကိုကွားတော့ ကောငျလေး စိတျအားတကျသှားတယျ။ ပနျးသီးပငျပျေါတကျ၊ ပနျးသီးတှကေို ခူးပွီး ဈေးထဲမှာ သှားရောငျးလိုကျတော့ လိုခငျြတဲ့အရုပျကွီးတှေ အမြားကွီးကို ဝယျနိုငျသှားတယျ။ ကောငျလေးက သူလိုခငျြတာတှေ ရသှားပွီ ဆိုတော့ ပနျးသီးပငျကွီးကို မသှေ့ားဟနျတူပါတယျ။ အရုပျတှနေဲ့ပဲ ဆော့နပွေီးတော့ ပနျးသီးပငျကွီးဆီကို ခွဦေးမလှညျ့တော့ပါဘူး။ ပနျးသီးပငျကွီးမှာတော့ ကောငျလေးကို စိတျမဆိုးနိုငျဘဲနဲ့ ကောငျလေးလာဆော့မယျ့အခြိနျကိုပဲ မြှျောနတောပေါ့။
အခြိနျတှကေုနျလာလိုကျတာ ကောငျလေးကလညျး လူကွီးအရှယျရောကျလာပွီး အိမျထောငျတှဘောတှတေောငျ ကလြာတာပေါ့။ တဈနမှေ့ာတော့ ကောငျလေးဟာ ပနျးသီးပငျကွီးဆီ ရောကျလာပါတယျ။ ကောငျလေး ရောကျလာတော့ ပနျးသီးပငျကွီးက ဝမျးသာအားရ ကွိုရှာပါတယျ။ ကောငျလေးဟာ အရှယျတှရေောကျလာပမေယျ့ ပနျးသီးပငျကွီးကတော့ ကောငျလေးကို သူ့ဆီကို လာဆော့တဲ့ ကလေးတဈယောကျလိုပဲ မွငျနပေါတယျ။
“ဟာ . . ပနျးသီးပငျကွီးကလညျးဗြာ . ဘာတှလောပွောနတောတုနျး။ ကြှနျတျောကလေး မဟုတျတော့ဘူးလေ။ အရှယျရောကျလို့ အိမျထောငျတောငျ ကနြပွေီဗြ။ အခု စိတျညဈတယျဗြာ။ ပိုကျဆံမရှိဘူး၊ အိမျဆောကျခငျြလို့ ပိုကျဆံပေးပါလားဗြာ”
“ ငါ့မှာက သဈပငျဆိုတော့ ပိုကျဆံမရှိပမေယျ့လညျး ဘာမှမပူပါနဲ့ ကောငျလေးရယျ။ ငါ့မှာ ကိုငျးတှရှေိတယျလေ။ ငါ့ကိုငျးတှကေို ခုတျပွီးတော့ အိမျဆောကျပေါ့”
ကောငျလေးက ပြျောပြျောရှငျရှငျပဲ ပနျးသီးပငျကွီးရဲ့ ကိုငျးတှကေို ခုတျပွီး အိမျအသဈဆောကျလိုကျပါတယျ။ အိမျဆောကျပွီးတာနဲ့ ကောငျလေးက ပနျးသီးပငျကွီးဆီကို ယောငျလို့မှ ခွဦေးမလှညျ့တော့ပါဘူး။ ပနျးသီးပငျကွီးမှာတော့ ကောငျလေးကို လှမျးဆှတျသတိရပွီးတော့ မြှျောလငျ့နတောပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ အခြိနျတှကေုနျလာပွီးတော့ ကောငျလေးဟာလညျး အသကျ၅ဝကြျော လူကွီးတဈယောကျ ဖွဈလာပါတယျ။ တဈနမှေ့ာ ကောငျလေးက ပနျးသီးပငျကွီးဆီကို ရောကျလာပါတယျ။ ကောငျလေးလာတော့ ပနျးသီးပငျကွီးမှာ ပြျောလို့ရှငျလို့။
“ကလေးရယျ . . ငါနဲ့လာဆော့ပါဦးလား။ အရငျလို ပြျောပြျောရှငျရှငျပေါ့ ကလေးရယျ။ မငျးမရှိလို့ ငါ့မှာ ပငျြးလိုကျတာကှယျ”
“ပနျးသီးပငျကွီးကလညျး . . ။ ကြှနျတျောကလေး မဟုတျတော့ဘူးလေ။ မွေးတောငျ ခြီနရေပွီ။ စကျလှတေဈစီးနဲ့ ရှကျလှငျ့ပွီး အနားယူခငျြလို့။ ငါ့ကို ကူညီပေးပါလားကှာ”
“ကလေးရယျ . . မငျးလိုအပျတာတှေ အကုနျလုံးကို ဖွညျ့ဆညျးပေးဖို့ ငါ့ဘကျက အဆငျသငျ့ပါပဲ။ ငါ့ပငျစညျကွီးကို ခုတျလှဲပွီးတော့ စကျလှဆေောကျလိုကျလေ။ ပွီးရငျ စကျလှလေေးစီးပွီးတော့ အနားယူပေါ့ ကလေးရယျ”
ပနျးသီးပငျကွီးရဲ့ ခှငျ့ပွုခကျြကို ကွားရတော့ ကောငျလေးက ပြျောပြျောရှငျရှငျပဲ ပနျးသီးပငျရဲ့ ပငျစညျကွီးကို အခွကေနေ လှနဲ့တိုကျပွီး စကျလှဆေောကျလိုကျတာပေါ့။ ပနျးသီးပငျကွီးမှာ သဈငုတျတိုပဲကနျြပါတော့တယျ။ ကောငျလေးကလညျး လိုခငျြတာကို ရပွီဆိုတော့ ပနျးသီးပငျကွီးကို သတိမရတော့ပါဘူး။ ပနျးသီးပငျကွီးမှာတော့ နှဈပေါငျးမြားစှာ ကောငျလေးလာမယျ့အခြိနျကိုပဲ အမွဲမြှျောလငျ့နရေတာပေါ့။ နှဈပေါငျးမြားစှာကွာပွီးတဲ့အခါမှာ ကလေးဟာလညျး အသကျ၈ဝနားကပျလို့ လာပါတယျ။ ဒီတဈခါ ပနျးသီးပငျကွီးဆီရောကျလာတော့ ပနျးသီးပငျကွီးကလညျး အရငျလို ဝဝေဆောဆာမရှိတော့ပါဘူး။
“ကလေးရယျ . . ဒီတဈခါ မကူညီနိုငျလို့ စိတျမကောငျးဘူးကှယျ . . ။ ငါ့မှာက မငျးအတှကျ ပနျးသီးတှေ မသီးနိုငျတော့ဘူး”
“ပနျးသီးပငျကွီးရယျ . . ငါ့မှာလညျး ဝါးစရာသှားတှေ မရှိတော့ပါဘူး”
“ပွီးတော့လညျးလေ . . ။ ကောငျလေးရယျ မငျး တကျပွီး ဆော့လို့ရအောငျ ပငျစညျတှေ၊ အကိုငျးတှလေညျး မရှိတော့ပါဘူးကှယျ”
“ပနျးသီးပငျကွီးရယျ . . ။ ငါလညျး အရငျလို မဆော့နိုငျတော့ပါဘူး။ အသကျကွီးလာပွီဆိုတော့ အရငျလို မပေါ့ပါးတော့ဘူးလေ။ ငါ အေးဆေးနားခငျြလာပွီကှာ”
“ကောငျလေးရယျ . . ။ အေးဆေးနားခငျြရငျတော့ ငါ့မှာ အမွဈတှကေနျြပါသေးတယျ။ ငါ့ပျေါမှာ အေးဆေးထိုငျနားလိုကျပါနျော။
ပနျးသီးပငျကွီးက ငိုကွှေးပွီးတော့ ပွောလိုကျပါတယျ။ ကောငျလေးဟာလညျး မောဟိုကျနှမျးလစြှာနဲ့ သဈငုတျတိုပျေါမှာ ထိုငျခလြိုကျပါတယျ။ နဝေငျခြိနျကိ စောငျ့မြှျောရငျးနဲ့ပေါ့။
ပုံပွငျလေးကတော့ ဒါပါပဲ။ ပုံပွငျထဲက ပနျးသီးပငျကွီးကို သနားနတေယျဆိုရငျတော့ မိဘနှဈပါးကို ကြေးဇူးဆပျလိုကျပါ။ ကြှနျတျောတို့တှကေ အရှယျရောကျပွီဆိုတာနဲ့ မိဘရငျခှငျကနထှေကျပွီး တဈအိုးတဈအိမျထူထောငျကွတယျ။ “ခလုတျထိမှ အမိတ” ဆိုသလို အခကျအခဲတှေ တှလေ့ာမှ၊ ဒုက်ခတှေ ရောကျလာမှ မိဘနှဈပါးကို သတိရလာကွတယျ။ မိဘတှေ ရငျထဲမှာတော့ သားသမီးတှေ ဘယျလိုပဲရကျစကျပဈခှာသှားပါစေ၊ မဟောငျးနှမျးတဲ့အခဈြတှနေဲ့ ပေးဆပျနတေဲ့သူတှပေါ။ အဲဒီတော့ မိဘနှဈပါးကို စိနျရှပေတ်တမွား၊ အိမျမွခွေံကားတှနေဲ့ မထားနိုငျရငျ နပေါစေ၊ မိဘနှဈပါး သကျရှိထငျရှားရှိနတေုနျး မပူမပငျမကွောငျ့မကွဖွဈရအောငျ ကြေးဇူးဆပျကွပါလို့ တိုကျတှနျးလိုကျရပါတယျ။